Taa na akụkọ ihe mere eme: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakır Line - RayHaber
HomeGeneralTaa na akụkọ ihe mere eme: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakır Line
05 / 08 / 2019 Levent Elmastaş General, Turkey, Taa na akụkọ ihe mere eme 0
5 August 1935 Fevzi Line Pasha-Diyarbakır ruru Ergani-Maden Station. Ali Çetinkaya, Deputy nke Nafia, mepere 22 1935 504. 64 kilomita. E nwere ọbụna oghere 37, ebe 1910 na 5000 na-agagharị na ogidi. Usoro a ejirila 18.400 rụọ ọrụ na nkezi 118.000.000 kwa ọnwa. Ọnụahịa ahụ dị gburugburu XNUMX lira.
Taa na History: 5 August 1935 Fevzi Pasha-Diyarbakır Line ruru Ergani-Maden Station. 05 / 08 / 2012 5 August 1935 Fevzi Line Pasha-Diyarbakır ruru Ergani-Maden Station. Ali Çetinkaya, Deputy nke Nafia, mepere 22 1935 504. 64 kilomita. E nwere ọbụna oghere 37, ebe 1910 na 5000 na-agagharị na ogidi. Usoro a ejirila 18.400 rụọ ọrụ na nkezi 118.000.000 kwa ọnwa. Ọnụahịa ahụ dị gburugburu XNUMX lira
Taa na History: 5 August 1935 Fevzi Pasha-Diyarbakir Line ruru Ergani-Maden Station 05 / 08 / 2015 Taa na History 5 August 1935 Fevzi Line Paşa-Diyarbakır ruru Ergani-Maden Station. Ali Çetinkaya, Deputy nke Nafia, mepere 22 1935 504. 64 kilomita. E nwere ọbụna oghere 37, ebe 1910 na 5000 na-agagharị na ogidi. Usoro a ejirila 18.400 rụọ ọrụ na nkezi 118.000.000 kwa ọnwa. Ọnụahịa ahụ dị gburugburu XNUMX lira.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakır Line ... 05 / 08 / 2016 Taa na History 5 August 1935 Fevzi Line Paşa-Diyarbakır ruru Ergani-Maden Station. Ali Çetinkaya, Deputy nke Nafia, mepere 22 1935 504. 64 kilomita. E nwere ọbụna oghere 37, ebe 1910 na 5000 na-agagharị na ogidi. Usoro a ejirila 18.400 rụọ ọrụ na nkezi 118.000.000 kwa ọnwa. Ọnụahịa ahụ dị gburugburu XNUMX lira.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakır Line ... 05 / 08 / 2017 Taa na History 5 August 1935 Fevzi Line Paşa-Diyarbakır ruru Ergani-Maden Station. Ali Çetinkaya, Deputy nke Nafia, mepere 22 1935 504. 64 kilomita. E nwere ọbụna oghere 37, ebe 1910 na 5000 na-agagharị na ogidi. Usoro a ejirila 18.400 rụọ ọrụ na nkezi 118.000.000 kwa ọnwa. Ọnụahịa ahụ dị gburugburu XNUMX lira.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakır Line 05 / 08 / 2018 Taa na History 5 August 1935 Fevzi Line Paşa-Diyarbakır ruru Ergani-Maden Station. Ali Çetinkaya, Deputy nke Nafia, mepere 22 1935 504. 64 kilomita. E nwere ọbụna oghere 37, ebe 1910 na 5000 na-agagharị na ogidi. Usoro a ejirila 18.400 rụọ ọrụ na nkezi 118.000.000 kwa ọnwa. Ọnụahịa ahụ dị gburugburu XNUMX lira.
Taa na History: 24 March 1926 Arade-Diyarbakır-Ergani Line Fevzipaşa-Malatya-Ergani-Diyarbakır 24 / 03 / 2015 Taa, 24 March 1926 Arade-Diyarbakır-Ergani Line gbanwere gaa ụzọ Fevzipaşa-Malatya-Ergani-Diyarbakır. E nyere ahịrị ahụ Danish-Swedish ụlọ ọrụ Nydqvist Holm.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 1 October 1935 Çankırı-Atkaracalar line nọ n'ọrụ 01 / 10 / 2012 1 October 1882 II.Abdulhamid rịọrọ ka e guzobe ụlọ ọrụ mgbanwe iji kwurịta ihe nsonaazụ ndị a ga - eme na alaeze ahụ site na nzuzo ka ọ ga - ezigara Onye Nchọpụta. N'okpuru onyeisi oche nke Hasan Fehmi Pasha, Minista Nafia, a malitere ọrụ nhazi na Nafia, ahia, ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo. 1 October 1890 Ntọala na Zurich, 63 nde-franc isi obodo nke Oriental okporo ụzọ. The Bank nwetara nnweta nke Deutsche Bank na Vienna Bank Verein si Baron Hirsch na 88 puku mbak Rumeli okporo ụzọ megide 72.355.509 Frank. 1 October 1893 Decession Nrụpụta nke Thessaloniki-Istanbul netline line, nke e nyere French, amalitela. E mepeere Line na 1 April 1896. 1 ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: Neus Deputy Ali Ceinkaya mepere 12 November 1935 Irmak-Filyos line 12 / 11 / 2012 Taa ke History November 12 1918 Anatolian Railways na ndị agha nwere ike inye coal ka isiokwu 1400 penny zigara General Directorate ga-enye ụlọ ọrụ ga na-akọ ya na-achọta onwe ya si ahịa na ikpe nke oké ọnụ. Ali Çetinkaya mepere 12 nke 1935 Irmak-Filyos.
Taa na akụkọ ihe mere eme: Neus Deputy Ali Ceinkaya mepere 12 November 1935 Irmak-Filyos line 12 / 11 / 2012 Akụkọ Taa Taa 12 November 1918 Akwụkwọ ozi ahụ zigara na General Directorate nke Anatolian okporo ụzọ okporo ụzọ na-akọ na ndị agha nwere ike ịnye mmanụ ọkụ na 1400 penny ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ hụrụ na ọ dị oke ọnụ. Nafia Deputy Ali Çetinkaya mepere 12 November 1935 Irmak-Filyos line. Otu isiokwu dị na isiokwu a: Taa na History: 11 November 1961 Onye isi nchịkwa nke State Railways Behiç Erkin nwụrụ n'oge 84Today 11 na November 1961 mbụ General Manager nke State Railways XHUMX nwụrụ mgbe ọ dị afọ 84. N'oge Agha Ugbo, ndị ọrụ Colonel Behiç (Erkin) si na Istanbul gaa Ankara bụ ndị mbụ
Taa na akụkọ ihe mere eme: 1 October 1935 Çankırı-Atkaracalar line nọ n'ọrụ 01 / 10 / 2015 Taa na History 1 October 1882 II.Abdulhamid rịọrọ ka e guzobe ụlọ ọrụ mgbanwe iji kwurịta ihe nsonaazụ ndị a ga-eme na alaeze ahụ site na nzuzo ka ọ ga-ezitere onye na-achọ. N'okpuru onyeisi oche nke Hasan Fehmi Pasha, Minista Nafia, a malitere ọrụ nhazi na Nafia, ahia, ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo. 1 October 1890 Ntọala na Zurich, 63 nde-franc isi obodo nke Oriental okporo ụzọ. The Bank nwetara nnweta nke Deutsche Bank na Vienna Bank Verein si Baron Hirsch na 88 puku mbak Rumeli okporo ụzọ megide 72.355.509 Frank. 1 October 1893 Decession Nrụpụta nke Thessaloniki-Istanbul netline line, nke e nyere French, amalitela. Line, 1 April na 1896 ...
Taa na History: 5 August 1935 Fevzi Pasha-Diyarbakır Line ruru Ergani-Maden Station.
Taa na History: 5 August 1935 Fevzi Pasha-Diyarbakir Line ruru Ergani-Maden Station
Taa na akụkọ ihe mere eme: 5 August 1935 Fevzi Paşa-Diyarbakır Line ...
Taa na History: 24 March 1926 Arade-Diyarbakır-Ergani Line Fevzipaşa-Malatya-Ergani-Diyarbakır
Taa na akụkọ ihe mere eme: 1 October 1935 Çankırı-Atkaracalar line nọ n'ọrụ
Taa na akụkọ ihe mere eme: Neus Deputy Ali Ceinkaya mepere 12 November 1935 Irmak-Filyos line
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (263) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (619) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (518) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (665) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)